Nezvedu | GIGALIGHT
Active Active Cables
Yakabatana Optical Modules
WDM / Kubatana
GIGALIGHT yakagadzwa muna 2006. Icho chinoshamisa bhizinesi rebhizimusi mumunda wepasirese kutaurirana kwekuona, pamwe nehutungamiriri hwetekinoroji uye dhizaini dhizaini mune yepasirese data centre munda.
Yedu huru products inosanganisira optical transceiver modules (kusanganisira yakakwira-tsananguro vhidhiyo optics), inoshanda tambo tambo (kusanganisira mutengi USB &HDMI tambo) uye akabatana optical module.
The company's tekinoroji mapuratifomu anosanganisira yemahara nzvimbo Optical dhizaini uye kurongedza, silicon Optical chip dhizaini uye kurongedza, COB yakasanganiswa yekupakata tekinoroji chikuva, sub-micron yakawanda-chiteshi Optical musangano chikuva, uye yakabatana opareta yekutaurirana tekinoroji chikuva.
Vatengi vakuru vanosanganisira epasi rese makambani eInternet, vanoshanda neterecom, vatengesi vezvinhu zvekutaurirana, uye network system vanobatanidza.
Global Optical Interconnection Design Innovator
21 software copyright
Nhamba yose yevashandi variko inenge inenge 600
Mutengi anonyanya kutarisa, kushandiswa kwezvakanaka, kushanda pamwe nekubudirira, uye kuzvidzora.
GIGALIGHT yakazvipira kugadzira 5G uye inotevera-chizvarwa data centre Optical yekubatana musika.
GIGALIGHT yakange yakazvipira mukugadzira kukuru-kwema100G transceivers (zviuru makumi mashanu pamwedzi), uye inokasira kusimudzira kwe50,000G /400G data centre optics, coherent optics, 5G Optical transceivers uye 5G yakasarudzika passive optical zvikamu.
GIGALIGHT yakatanga kupa 25G / 100G optical modules uye makambani akabatanidza optical kune vatengi pasi rose.
GIGALIGHT akapedza kushambadzira kwayo 10G / 40G inoita cables optical mu data data.
GIGALIGHT akapinda mu passive optical components market uye HD video yekukurukurirana misika.
GIGALIGHT yakavhurwa 10G / 40G / 120G inoshanda macho tambo yedata centre uye epamusoro-mashandiro emakomputa ekunyorera.
GIGALIGHT yakange yakazvipira kuR & D uye kugadzirwa kwezvinhu zvemaziso (kubva pa100Mb kusvika gumiGb/s), Uye yakavaka musika wepasi rese chiteshi chema transceivers e optical
Optical Transceiver ModulesActive Active CablesYakabatana Optical Modules
Pinda NetworkData CenterWDM / Kubatana5G NetworkKuchengetedzwa kweSevaBroadcast Vhidhiyo
Press Releaseskuuya EventsIndasitiri Insights
Nezvedutsika nemagariroHonorsCet CompetitivenessCareersTaura nesu
Fonera zvipo zvakakwana, nhau, nezvimwe.
Imeyili ku: sales@gigalight.com
Nezvedu Taura nesu Download Center